Fanarenana ny toekarena : mitohy ny fanamboarana fotodrafitrasa | NewsMada
Fanarenana ny toekarena : mitohy ny fanamboarana fotodrafitrasa
Lalana, fambolena, fiompiana, fananan-tany, famatsiana angovo, fiarovana ny tontolo iainana, sns. Nasian’ny filoha Rajaonarimampianina Hery tsindrim-peo manokana ireo ho fanarenam-pirenena, nandritra ny kabary nataony teny Iavoloha, omaly. Mitentina 983 tapitrisa dolara ny fitambaran’ny famatsiam-bola avy any ivelany andrasana.
Ho an’ny taona 2016-2017, tetibola 450 tapitrisa euros atokana ho an’ny fanamboaran-dalana manerana ny Nosy. Nasiany teny manokana ny lalana eto Antananarivo, tsy mendrika amin’ny maha Renivohitra azy. Mahatratra 47 miliara Ar ny vola atokana hikojakojana ny lalam-pirenena sy ny lalana an-tanàn-dehibe.
Maro ny efa vita amin’ireo lalam-pirenena lehibe, RN4 Mahajanga, RN2 Toamasina, RN7 Toliara, ny RN9 mampitohy an’i Toliara sy Morombe. Hamboarina koa ny lalana mampifandray ny morontsiraka manerana ny Nosy.
Raha izany tokoa ny ampanantenaina, tsy tambo isaina ny asa miandry : ny any avaratra, ohatra, Ambilobe –Vohemar, efa nandrasana hatry ny ela; any atsimo, any amin’ny faritra Anosy sy Androy manontolo ; ny any atsinanana, hatramin’izao, tsy mety vita ny RN44 mankany Ambatondrazaka ; any andrefana, lalan’ny halatra omby, Tsiroanomandidy–Maintirano. Santionany ireo fa betsaka ireo distrika sy kaominina mitoka-monina.
Trakitera ho an’ny tantsaha
Mikasika ny fambolena, fotodrafitrasa fanajariana lemaka 170 no vita, manondraka velaran-tany 82.000 ha. Misy koa ny fanofanana ny tantsaha ho mpandraharaha ambanivohitra eo amin’ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Hisy ny fitsinjarana trakitera ho an’ny tantsaha.
Mikasika ny indostria, nambaran’ny filoha fa niteraka asa anarivony ny fiverenan’ny tsena amerikanina Agoa eto amintsika.